Kenya iyo Google inay internetka ka dhigaan dhammaan hidaha hiddaha iyo dhaqanka ee Afrika - Afrikhepri Fondation
Welcome XAALADAHA SHAQADA
Kenya iyo Google si ay uga dhigaan dhammaan dhaqamada dhaqameed ee Afrika online
Lisagu Kenya iyo Google waxay internetka ku dhigi doonaan dhammaan hidaha hidaha iyo dhaqanka Afrika oo ay uga mahadcelinayaan Machadka Dhaqanka Google. In kasta oo kala duwanaanshaha adeegyada khadka tooska ah loo maro dhaqanka, haddana waxaan rumeysan nahay in dhaqanka Afrika uu aad u hooseeyo. Mashruucan wuxuu ka caawinayaa yareynta farqiga in yar, waxaana mashruucan lagu dhawaaqay inuu yahay mashruucii ugu ballaarnaa ee abid la bilaabo Africa : Digitization ee dhaxalka dhaqanka ee qaarada oo dhan. Kala duwanaanshaha iyo dhaqanka dhaqanka Afrika waa internetka. Isticmaalayaasha ayaa kaala tashan kara kombiyuutar iyo qalab mobile (telefoon iyo kiniin).
Mashruucu waxaa si wadajir ah u hogaaminaya Google Machadka Dhaqanka iyo Kenya iyada oo loo marayo Xarunteeda Qaranka iyo Dukumintiyada Dukumintiga. In ka badan 1000 shey ayaa durbaba saaran madasha, oo ay ku jiraan geesiyaal Kenyan ah, farshaxanno Shona ah oo laga keenay Zimbabwe, Makondé oo Tansaaniya ah iyo Karamojong oo ku taal Uganda. Shaqooyinka farshaxanka ee lagu xardhay alwaax, dhagax iyo / ama bir. Meel gaar ah ayaa loogu talagalay farshaxanka calabashka Galbeedka Afrika.
Bandhigyo ayaa lagu qabtay internetka Oktoobar 2015. Mashruucani waa martiqaad uu ku baranayo taariikhda Lagos, inuu ku socdo tallaabooyinka Nelson Mandela iyo ilaalinta xafladaha kala duwan ee Afrika. Machadka Dhaqanka ee Google wuxuu ku jiraa xafiisyadeeda, qeyb kale oo ka mid ah mashruucan ayaa ahaa bilawga mashruuca Mobile ee Arbacada Qaranka ee Kenya. Tani waa kan ugu horreeyay ee lagu xaqiijiyey farsamooyinka Machadka Dhaqanka Google. Isticmaalayaashu waxay heli karaan waxyaabo farshaxan iyo dukumiinti dhif ah, maaha inay sheegaan sheekooyinka qiyamka.